यस्तो बेलामा चरम यौन उत्तेजनामा हुन्छन किशोरीहरु ! [कसरी बढ्छ युवत्तिको यौन उत्तेजना ?] « Janaboli
यस्तो बेलामा चरम यौन उत्तेजनामा हुन्छन किशोरीहरु ! [कसरी बढ्छ युवत्तिको यौन उत्तेजना ?]
काठमाडौं । आखिर महिलाहरु कुन बेला यौन सम्बन्धको लागि तयार हुन्छन ? युवावस्थामा यो कुरा सबैंको मनमा खेलिरहेको हुन्छ । एउटा के मान्यता रहेको छ भने, महिनावारी चक्रमा डिम्ब निस्कासन भइसकेपछि वा महिनावारी भएको करीब दुई हप्तादेखि सुरु भएर महिनावारी हुँदा रक्तस्राप नभएसम्म आइपर्ने शारीरिक र संवेगात्मक समस्याहरूलाई नै महिनावारी हुनु पूर्वका समस्याहरूको रूपमा लिने गरिन्छ ।